Ahoana no amantarana ny zaza misy poizina | Bezzia
Ahoana no amantarana ny zaza misy poizina
Maria Jose Roldan | 10/09/2021 22:20 | Ampianaro ny ankizy
Ny fiankinan-doha dia tsy olana mitranga amin'ny olon-dehibe irery ihany, satria mety misy zaza misy poizina koa. Ny zaza manana olana amin'ny fitondran-tena dia mety hiteraka fahasimbana lehibe eo amin'ny vatan'ny fianakaviana.
Raha hitan'ny ray aman-dreny fa fitondran-tena misy poizina ny zanany, ilaina ny mahita matihanina faran'izay haingana, hanitsiana olana ara-pitondra-tena toy izany. Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia holazainay aminao ny toetrany mampiavaka ny zaza manapoizina na ny mpanararaotra ary ny zavatra tokony hatao momba azy ireo.
1 Ahoana no hamantarana zaza misy poizina na masiaka?
2 Fa maninona no misy zaza misy poizina
Ahoana no hamantarana zaza misy poizina na masiaka?
Tsy sarotra ny mamantatra zaza misy poizina satria matetika izy no mahery setra kokoa noho ny mahazatra ary zara raha manaja ny fahefana izy ireo. Ara-dalàna raha miharatsy eo ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny filialana mandritra ny taona maro. Avy eo dia asehonay amin'ny fomba antsipiriany kokoa ianao, ireo toetra mampiavaka ny zaza misy poizina:
Ny toetra lehibe na toetra mampiavaka azy dia ny fanoherana ny fahefana sy ny fandavana ny lalàna apetraka ao anatin'ny fianakaviana. Manao izay tiany izy ireo na inona na inona lazain'ny hafa.
Matetika izy ireo dia tsy mandray tsia ho valiny satria mino izy ireo fa mendrika ny zava-drehetra. Rehefa misy tsy mety dia mihetsika mahery setra izy ireo ary tezitra mafy.
Ireo dia ankizy izay tsy manana fangorahana firy ary tsy mahatsapa na inona na inona rehefa miteraka fanaintainana amin'ny olon-kafa izy ireo. Ao amin'ny tontolon'ny fianakaviana, mirona hitondra ny ray aman-dreniny amin'ny fahafaham-baraka sy amin'ny fomba manambany izy ireo.
Matetika ny fitondran-tenan'ny ankizy misy poizina dia matetika masiaka ary voan'ny hatezerana. Afaka manafika matetika ny ankizy hafa sy ny ray aman-dreniny izy ireo.
Ny iray amin'ireo toetra mahazatra indrindra amin'ny zaza misy poizina dia matetika fanodinkodinana. Rehefa mahazo zavatra mety hahasoa azy ireo, mahay manodikodina na iza na iza izy ireo.
Fa maninona no misy zaza misy poizina
Maro ny ray aman-dreny manontany tena raha misy poizina Zavatra voajanahary amin'ny zaza izy io na vokatry ny fanabeazana ratsy. Mety hitranga izany fihetsika tsy mendrika izany dia vokatry ny olana ara-tsaina amin'ny zaza. Etsy ankilany, voalaza fa ny poizina dia mety koa avy amin'ny karazana fiompiana izay tsy ampy. Ny fanabeazana omen'ny ray aman-dreny dia misy fiantraikany amin'ny toetran'ny zaza.
Raha notezaina tamina tontolo misy poizina ny zaza dia ara-dalàna raha miaraka amn'ny fandehan'ny fotoana ny zaza dia mahazo toetra masiaka. Ny fanabeazana dia tsy maintsy miorina amin'ny andiana soatoavina manampy ny zaza hitombo fanajana ny andiana fitsipika sy adidy ao anatin'ny trano.
Raha fintinina, ny asan'ny ray aman-dreny no lakile raha ny amin'ny fisorohana ny zanany tsy hanana fitondran-tena misy poizina. Ny faharanitan-tsaina dia tsy maintsy raisina rehefa manabe sy mampiditra ao amin'izy ireo andiana soatoavina toy ny fanajana na fiaraha-miory amin'ny hafa. Ilaina ny fanabeazana mandritra ny fahazazany satria amin'ity dingana ity dia mamolavola sy mamolavola ny toetrany ny ankizy. Amin'ny tranga fandinihana fihetsika misy poizina ao amin'ny zaza, dia zava-dehibe ny fangatahan'ny ray aman-dreny fanampiana amin'ny matihanina tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » RENY » Ampianaro ny ankizy » Ahoana no amantarana ny zaza misy poizina